TRF emshinini 2017 | Umklomelo Wemivuzo | Amaphephandaba kanye ne-intanethi
Ikhaya Inkampani TRF ku-Press 2017
Imithombo yezindaba ithole i-The Reward Foundation futhi isakaza izwi ngomsebenzi wethu kuhlanganise: amakilasi okuqwashisa izingane; ukubiza ngomsebenzi osebenza kahle, ubucholi obusekelwe ebuchosheni kuzo zonke izikole; isidingo sokuqeqesha abahlinzeki bezempilo be-NHS ekubhebhekeni kocansi kanye nomnikelo wethu ucwaningo ekuhlukunyezweni ngokocansi okubangelwa ucansi. Leli khasi liqhakambisa ezinye zezimpumelelo zethu emaphephandabeni naku-inthanethi. Bekungunyaka wethu omuhle kakhulu okwamanje.
Amaphephandaba kanye ne-Inthanethi
2 Disemba 2017 - Insiza yezindaba eku-inthanethi eCroatia. Ingxoxo ephelele noMary Sharpe iyatholakala lapha ngesi-Croatian. I-Google Translate inomsebenzi omuhle owuhambisa esiNgisi. Enye, inguqulo ende yocwaningo ivele ephephandabeni lamasonto onke uGlas Koncila ngo-16 November 2017 futhi ibonakala lapha.
16 Okthoba 2017 - landela okuvela kwinhlolokhono yeRadio Sputnik
Isihloko esiphelele siyatholakala lapha online. I-TRF blog enkulumweni ingukuthi lapha futhi ikuvumela ukuba ulalele ingxoxo egcwele bukhoma.
10 Okthoba 2017 - TRF ku-PoliceProfessional.com, indatshana kaNick Hudson
9 Okthoba 2017 - TRF ephephandabeni likazwelonke
Isihloko esiphelele siyatholakala lapha.
Indaba ephelele itholakala lapha.
Iphephandaba le-TRF eBusiness
4 Okthoba 2017 - Izici ze-TRF endabeni esekhasini langaphambili
27 Septhemba 2017 - I-Reward Foundation yayingabaxhasi abasemthethweni beThe Coolidge Effect e-Edinburgh
23 Septhemba 2017 - I-Reward Foundation yayingabaxhasi abasemthethweni beThe Coolidge Effect e-Edinburgh
Isihloko esigcwele se-Christian Institute siyatholakala ku-intanethi lapha. Inguqulo yayo yabonakala kwi-website ye-Swiss christian jesus.ch njenge I-Pornographie impikiswano Jugendliche zu sexuellen Straftaten ngo-13 Septemba 2017.
I-Scottish Daily Mail, i-4 Septemba 2017. Indaba iyatholakala ku-intanethi lapha.
The Herald, 4 September 2017, Ikhasi 12. Itholakala ku-intanethi lapha. Ibuyiselwe kabusha njenge Izithombe ze-intanethi zigxeke ukuphakama kobulili obungaphansi kwe-18s on Aadhu.com ngosuku olufanayo. Uhlobo lwesiJalimane luvele kuwebhusayithi yase-Austrian 'futurezone technology news' njenge I-Schottland gibt Online-Pornos I-Sex-Verbrechen.
I-Sunday Post, i-3 Septemba 2017. Indaba iyatholakala ku-intanethi lapha. Izinguqulo ziphinde zashicilelwa ezincwadini zeDundee neNewcastle.
ISunday Mail, 20 Agasti 2017. Le ndaba iyatholakala naku-inthanethi lapha.
I-Courier 3 March 2017
Uhlobo oluhleliwe lwale ndaba ye-Positively Scottish lungahle lubonakale ku- addictionhelper.com lapha.